Saxafi South African ah oo sadex sano ISIS Heysatay oo Dib loogu Celiyay Dalkiisa. - Awdinle Online
Saxafi South African ah oo sadex sano ISIS Heysatay oo Dib loogu Celiyay Dalkiisa.
January 4, 2020 (Awdinle Online) –Sawirqaade saxafi ah oo u dhahsay dalka South Africa ayaa sadex kadib sano kadib dalkiisa dib ugu soo laabatay kadib markii ay kooxda isku magacawday Islamic State IS ay afduub ku kaxeesteen horraantii sannadka 2017kii.
Shiraaz Maxamed ayaa laga qafaashay xuduudka u dhexeeya wadamada Siiriya iyo Turkiga, hay’ada lagu magacaabo Gift of the Givers ayaa sheegtay in Shiraaz uu wadanka Siiriya u aaday si uu uga qoro shacabka dhibaateesan ee wadankaas.
Hay’ada ayaana barteeda Twitter kusoo qortay bishii December ee aynu soo dhaafnay in Shiraaz lasii daayay balse uu sugayo in dawladaha Turkiga iyo South Africa ay agaasimahaa safarka dib loogu celinaya wariyahaan wadankiisa.
Arrimaha la xiriira habka sii deynta Shiraaz lama shaacin mana cadda, balse wakaalada wararka Reuters oo xiganeysa hay’ada Gift of Givers ayaa sheegtay kadib markii wasaarada arrimaha dibedda ee Shouth Africa ay xiriir la sameysay sirdoonka Turkiga ayaa loo sheegay in Shiraaz ay iyaga hayaan.
Jimcihii lasoo dhaafay ayey qoyska Shiraaz xaqiijiyeen in uu wadankiisa dib ugu soo laabtay.
Previous articleMareykanka oo Muwaadiniintiisa Ciraaq jooga u sheegey in ay isaga baxaan
Next articleFaah faahin: Dil ka dhacay Boosaaso & Xiisad ka dhalatay